Nei Zvigadzirwa Zvekudyidzana Kubatana Zviri Zvakakosha Kuti Chikwata Chako Chibudirire | Martech Zone
Hightail yakaburitsa mhedzisiro yayo yekutanga Nyika yeCreative Kubatana Ongororo. Ongororo iyi yakanangana nekushambadzira uye zvikwata zvekugadzira zvinobatana kuendesa makomo ezvinyorwa zvepakutanga zvinodiwa kutyaira mishandirapamwe, kununura mhedzisiro yebhizinesi uye kuwedzera kutengesa uye mari.
Kushaikwa kweZviwanikwa uye Kuwedzera Kudiwa kuri Kukuvadza Vagadziri
Nekukura kwekuburitsa zvemukati mukati mega maindasitiri, kudiwa kweakasiyana, anomanikidza, anodzidzisa, uye emhando yepamusoro zvemukati ndeyechokwadi mazuva ano. Tsvaga algorithms anochida icho, masocial network anobudirira pairi, uye mabhizinesi anobatsirwa nazvo. Nekudaro, sezvo zvido zvinokwira, zvisikwa zviri kupwanywa.
Vanopfuura chiuru kushambadzira uye vehunyanzvi vehunyanzvi vakapindura, vachipa chiyero chekuti maitiro avo ekushandira pamwe anonyanya kunetsa, anoparadza zvakanyanya uye, anokanganisa mhando yezvinhu zvekugadzira. Maitiro asingabatsiri, akaputsika ekushandira pamwe anoshungurudza, anoparadza hunhu hwechikwata uye zvinokanganisa hunhu hwezvigadzirwa.
Yekutanga yepamusoro-mhando zvemukati zvinowedzera kukura. Zvikwata zvekushambadzira zvinoshorwa kuti zvisangane kudiwa kwakawandisa uye kubuditsa zvirimo zvepakutanga zvakaenzanisirwa, zvinoenderana, zvinosangana nemirau yemhando uye zvemhando yepamusoro, uye vazhinji vanofanirwa kuzviita nezviwanikwa zvakafanana. Dambudziko iri riri kuwedzera kukurumidza uye zvikwata zvakanakisa zviri kutsvaga nzira dzekushandira pamwe - kubva pakubata kusvika pakupera - kuitira kusangana nechikumbiro ichi chiri kukura. Hightail CEO, Ranjith Kumaran
87% yevanogadzira vanobvumirana kuti zvakakosha kuti sangano ravo rirambe riine mhando yezviri nyore kuyera zviwanikwa zviripo kusangana nezviri kudiwa zvemukati.
77% yevanogadzira vanobvumirana iyo yekuongorora yekuongorora uye yekubvumidza maitiro inoshungurudza
53% yevanogadzira vanoti kuwedzera kwekushushikana imhedzisiro yekuti vanhu vazhinji vabatanidzwe nekuongororwa kwemukati uye kubvumidzwa
54% yevagadziri vanobvumirana kuti avo ekushambadzira zvikwata zvakadzingwa, nekuda kwekushushikana
55% yevanogadzira vanonetsekana nekusangana nekuwedzera kwekuda kwezvakawanda, zvemhando yepamusoro zvemukati
Vanopfuura makumi mashanu muzana ezvakagadzirwa vanoti zvikamu zvese zveyekuvandudza nzira yavo zvine matambudziko
Haisi "chete" dambudziko rekushambadzira, zvinokuvadza bhizinesi rese
Maitiro akaputswa anodhura mari chaiyo, uye kunonoka kunosungirwa pakunonoka kukura kwemari:
62% vanotenda nguva nemari zviri kutambiswa kana uchigadzirisa kusanzwisisana uye kusanzwanana zvisizvo zvinouya kubva munzira yakaputsika.
48% vanoti yavo kukura kwemari kwakakuvara nekuti vaisakwanisa kuendesa zvemukati zvemhando nekumhanya kwakaringana;
58% vanoti kuwedzera kutengesa uye mari ndiro rakakura bhizinesi kubatsirwa kugadzirisa matambudziko mukugadzira kwekudyidzana maitiro
63% vanoti ndizvo haikwanise kuyedza akasiyana ekugadzira chero sezvavanenge vachida, kudzikisira kukanganisa kwekudyara kwavo kwenhau
Zvikwata zviri kutsvaga nzira iri nani yekubatana
Kunyangwe hazvo kushambadzira uye kwekugadzira zvikwata vanganyunyuta, 85% inotaura kuti kubatana pamwe nekubatana - kana zvakanaka - zvinogona kuve chimwe chezvikamu zvakanakisa zvemabasa avo. Nepo kudzidza kwakaburitsa kuti 36% vanotenda kuti hapana tekinoroji yekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo nekubatana kwekugadzira, izvo hazvisi zvechokwadi.
Isu tinoshandisa Hightail nevatengi vedu kuti tibatsire kuongorora mifananidzo, mifananidzo, podcast, uye vhidhiyo nevatengi vedu. Ipuratifomu inopa yakachena interface ye timu ideation, manejimendi manejimendi, kuoneka, mhinduro, uye tendero.
Tags: assetsset managementkugamuchirwa kwekugadzirakubatana kwekugadziramhinduro yekugadziramaitiro ekugadzirazvisikwa zvekugadzirapfungwatsvaga yekuongororachikwata
Semrush Inowedzera Chishandiso Kukambaira Saiti Yako uye Tsvaga Nyaya dzeHTTPS
Chinyorwa chikuru Doug!
Hechino chimwe chikonzero chikonzero chekugadzira chinoda maturusi ekushandira- vanogona kusimudzira kugadzirwa kwavo nekushanda pamba kana mazuva mashoma pasvondo.
Tarisa, iyo yekugadzira inoda imwe yakanyarara nguva yega yekugadzira. Cubicle Mapurazi akanganisa izvo munzvimbo yebasa, kwechikamu chikuru. Zvakangooma zvakanyanya kuti upinde muZoni uye ugare imomo kwenguva yakareba zvakakwana kuti uwane mhinduro pasina zvinokanganisa nguva dzose.
Ipapo pane kuenda. Ini ndaipambadza 3 maawa pazuva ndichityaira ndichidzokera kubasa rangu muSilicon Valley. Maawa iwayo haana kuita wandinoshandira kana neni chero chakanaka zvachose - yaive nguva yakarasika uye yakawedzera kushushikana.
Fungidzira uchidzoreredza iwo maawa matatu kunyangwe mazuva maviri pasvondo- 3 mamwe maawa ekugadzirwa. Uye, pamwe kuwedzera kugadzirwa muhofisi yemba yakanyarara.
Asi, zvinongoshanda chete kana uchikwanisa kubatana uye usateme.
Izvi zvinongova zvimwe zvezvinhu zvandinoenda kuburikidza nazvo ndichitsanangura gadziriso sisitimu yandinoshandisa pabasa rangu chairo. SaSolopreneur, ini ndakavaka bhizinesi repamhepo rinowana vashanyi vanosvika mamirioni 4.5 pagore uye rinogadzira mari yakanaka. Hapana imwe nzira yandaigona kunge ndakaita izvozvo pasina iyi mhando yekuwedzera kwekuwedzera.
Ini ndinotsanangura yangu system mune yemahara online kosi inowanikwa pano:
Inonyanya kutarisana nezvinodiwa zvevakagadzira, saka ndinovimba vaverengi vako vanogona kubatsirwa.
Kutarisira mberi kune yako inotevera yakanaka posvo.